Obere ụgbọ ala ga-adabara na mgbanwe maka ịnya ụgbọ ala RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaAutgbọ ala ụlọ ga-adị mma maka ntụgharị ịnya ụgbọ ala
21 / 01 / 2020 16 Bursa, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, akpakanamde, Turkey, VIDEO
cargbọ ala ụlọ ga-adabara adaba maka mgbanwe ụgbọala
Turkey si Cars Initiative Group si Twitter akaụntụ e mere banyere ọhụrụ anụ ụlọ ụgbọ ala òkè. Ekwuputara ya na ikesa oke na ụgbọ ala nwere ihe eji eme ihe eji eme ka emelite ya na intaneti meputara dika 'ogo 3 ma gabiga mgbanwe mgbanwe ugboala.
Turkey si Cars Initiative Group (TOGG) na njedebe nke 2019 mere ka oké obi ụtọ na-akwalite anụ ụlọ automakers.
E gosipụtara ụmụ amaala ozi ọhụrụ banyere ụgbọ ala ahụ nwere nhọrọ chassis abụọ dị iche iche: SUV na Sedan.
Ndabere usoro nkwado usoro
TOGG image nkekọrịta mere site Twitter page "nwere ike kwalite Turkey si ụgbọ ala n'elu Internet 'larịị 3 na karịrị' nke kwurula ịnya ụgbọ akakabarede, na nnabata na mepere emepe akụrụngwa na elu mbanye ke obodo okporo ụzọ na nkwado usoro na ga belata ike ọgwụgwụ nke a ogologo njem" nkwupụta kwuru.
AKWKWỌ AKESTKỌ A GA-EGO ise
High mmetụta ike, mbara arụsi ọrụ ike na n'ezinụlọ nchekwa ọcha na elu-akwọ aka usoro nke ga-ekwe Euro NCAP 2022 kpakpando nchekwa norms nke 5 ga-n'enweghị-enwe njem na ụmụ amaala İNTURKEY ụgbọ ala.
Ọ bụ designlọ ọrụ nhazi ụlọ ọrụ Italy Pininfarina haziri ngwaọrụ ahụ. A rụrụ ụgbọ ala Prototype n'petali.
Ihe karịrị ndị injinịa 100 dị iche iche keere n'ichepụta ụgbọ ahụ. A na-etinye batrị nke ụgbọ ahụ n'ime ikpo okwu. Ezubere ya ịnata kpakpando ise site na ule ọghọm Euro NCAP. Vehiclegbọ ahụ ga-enwe ọkọlọtọ 5 na akpa ikuku 7. Ihe atụ nke izizi ka emepụtara ka ọ bụrụ ịbụ C otu SUV, ma ka ọ na-erule 2, a ga-etinye usoro dị iche iche 2030 na mmepụta. Enwere ntụgharị tulip na mgbago ihu nke ụgbọ ahụ.
Ihe eji eme ya bu ihe eji enyo elektrik. Ogwe ahụ nwere ihuenyo ngosipụta atọ na ihuenyo mgbasa ozi 10 inch (25,4 cm) na ihuenyo. Vehiclegbọ ahụ enweghị enyo akụkụ, kama, enwere igwefoto.
AKWCHKWỌ AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ AK OFKỌ
Thegbọala nke batrị lithium-ion kwadoro. A ga-enye ngwugwu ike abụọ na oke 300km na 500 km n'otu ụgwọ, dabere na batrị. Ejiri batrị nke ugbo ala 30% cha cha na erughi nkeji iri atọ. Site na sistemụ eji emechi emechi ka etinye ya n'ụgbọ ahụ, emebere ya ka injin ndị ahụ rụọ ọrụ dịka dynamo na nwayọ ma gbatịkwuo ya ruo 80% site na fanye batrị ahụ.
Emere ụgbọ ala ahu ka emeputa na injin abụọ dị iche iche, ya bụ 200 HP nke nwere azụ azụ na 400 HP nke nwere wheel anọ. Thegba ọsọ nke ụgbọ ala ahụ, onye ọsọ ọsọ ga-abụ 180 km / h, bụ 400-0 km / h osooso na nsụgharị nke 100 HP na 4.8 sekọnd na 200 HP.
Emebere ya na ụgbọ ala ahụ ga-enweta mmelite na-akpaghị aka site na ụlọ ọrụ nwere 4G / 5G njikọ andntanetị, na ụgbọala ahụ nwere ike ịkwụsịtụ ya ma ọ bụrụ na ọ nwere nsogbu. A kọwara na ụgbọ ala ahụ ga-enwe njiri nke ịnya ala nke 3.
G WN W KA A GA-EKWU OKWU N'ỌLỌ?
Turkey si Cars ga-edu ndú nke mgbasa tOGGer ruo 2022 ga-abịa n'ụzọ na-eduga ekele ya ọtụtụ Nchaji akụrụngwa na obibi, itieutom na e nwere ike ebubo na ụgbọ okporo ígwè na ụzọ. Site na ohere nke teknụzụ nke ịbụ ụgbọ ala ejikọtara na nke nwere ọgụgụ isi, ndị ọrụ nwere ike ịhazi ngwa ngwa ma jikwaa ụgwọ ụgbọ ala ha.
EGO NA-AKW THEKWỌ AKWOCKWỌ AKWOCKWỌ AKWOCKWỌ N'ỌZỌ
A ga-arụpụta ụgbọ ala ahụ n'ụlọ ọrụ ezubere ịmalite ọrụ na 2020 na ala ndị agha ndị agha Turkey na Gemlik, Bursa ma rụchaa ya na 2021. Akpara ụgbọ ala mbu ka eweputara ya na teepu na 2022 wee malite ire. Ruo Ọktọba 30, 2019, ekwuputala na ọnụọgụ ijeri TL nke ijeri 13 ga-eme n'afọ 22. E mere atụmatụ iji narị puku mmadụ atọ na narị atọ na iri anọ na ise ebe a na-emepụta ihe ma mepụta ụgbọ ala 4.323 puku n'ime ụdị 5 kwa afọ. Ọtụtụ mbelata ụtụ ụtụ dị iche iche dịka ịkwụpụ ụtụ kwụrụ ụgwọ, mwepụ ụtụ isi, mwepụ ụtụ isi, nkwado mkpuchi ego maka itinye ego na nkwa steeti maka ịzụrụ ụgbọ ala 175. Ebumnuche ya imepụta ụgbọ ala ahụ site na 30% nke anụ ụlọ na ihe nlereanya nke mbụ yana ịbawanye nha nke akụkụ ụlọ gaa na 51% na nke abụọ na nke atọ.
Ọwara Salarha na Mgbanwe nke obodo Rize
Ụgbọ ala kwụ ọtọ nke ala amalite Amụma na Istanbul
Okporo Ụzọ Ụzọ Pụrụ Iche Maka Ụgbọala Kwesịrị Ekwesị
France na-enye History for Autonomous Trains
Ọ bụ na China ka a na-anwale okporo ụzọ ego nke ala okporo ụzọ mbụ nke ụwa
Ọnụ ọgụgụ na-amalite maka MARC, Ngwá Agha Na-ahụ Maka Ụgbọala Kachasị Anya nke Europe
Ụgbọ ala ndị dị n'ime ụlọ ga-eme ka ọkụ eletrik 500 ga-eme okporo ụzọ
Ego ole ka ego ala ụlọ ahụ ga-abụ?
Autgbọ ala ụlọ ịbụ Dynamo nke Ngalaba Automotive
Michelin na-atụ aro ịhọrọ nhọrọ dị ka oge maka ọkwọ ụgbọ ala dị mma
A malitere inye ndị na-anya ụgbọ njem na Antalya usoro ịkwọ ụgbọala na-akpaghị aka
20 nde 1 Euro kwa afo 500 echekwa na metro na ugbo ala
Ụzọ na-eduzi ụgbọ okporo ígwè na ọkwọ ụgbọ ala
Ulo Ugbo ala Euro NCAP ule
Mgbanwe Drigbọala onomgbọalaala Ala
Cargbọ ala ụlọ
Nkọwapụta omogbọ ala ụlọ